आफुभन्दा बढी उमेरका महिलासँग घरजम गर्न चाहने पुरुष कमजोर « Salleri Khabar
आफुभन्दा बढी उमेरका महिलासँग घरजम गर्न चाहने पुरुष कमजोर
विवाहका लागि केटाको उमेर बढी हुनुपर्छ वा केटीको ? ठ्याक्कै यसको मापदण्ड कसैले तयार गरेको छैन । यद्यपी केटा भन्दा कम उमेरकै केटी खोजिन्छ हाम्रो समाजमा मात्र होइन, विश्वमै यस किसिमको प्रवृत्ति रहेको छ ।
विवाहका लागि योग्य भएसंगै केटा र केटीले एकअर्कालाई रोज्न पाउँछन् । तर, यसमा उमेरको कुनै मतभेद हुँदैन । तर, अहिले समय बदलिएको छ । श्रीमानको कमाईमा भर पर्ने महिलाको संख्या निक्कै कम रहेको छ । यद्यपी विवाहका लागि बढी उमेरका केटी खोजिने प्रवृत्ति त्यती छैन ।
आफुभन्दा बढी उमेरका महिलासँग विवाह गर्नका लागि पुरुषहरु किन राजी हुन्छन् ? यसमा केही कारण देखिन्छ ।
कतिपय पुरुषको यस्तो स्वभाव हुन्छ कि, जो अरुबाट आश्रय र सुरक्षा खोज्छन् । श्रीमतीको आडभरोसामा बस्न चाहने पुरुषहरुले बढी उमेरका महिलासँग विवाह गर्छन् ।
भोगाई, बुझाई, सोचाईको दायरा परिपक्क हुने भएकाले बढी उमेरका महिलासँग पुरुषहरु विवाहका लागि राजी हुन्छन् ।
आफुभन्दा कम उमेरकी महिलाहरुको सोच , व्यवहार सबै अपरिपक्क हुने हुनाले कतिपय पुरुषले आफुभन्दा परिपक्क श्रीमती खोज्ने गर्छन् ।
बढी उमेरकी महिलाले पारिवारिक मर्यादालाई उनीहरुले राम्ररी बुझ्छन् भन्ने हुन्छ । यसैगरी उनीहरु हरेक कुराका लागि श्रीमान्को मुख ताक्दैनन् । यही मानसिकताले बढी उमेरका महिलासँग पुरुषहरु विवाह गर्न तयार हुन्छन्।
आफ्ना बालबालिका तथा साथिहरुसँग कोरोनाभाइरसको बारेमा यस्ता कुरा मात्र गर्नुहोस्!
आफ्ना बालबालिका तथा साथिहरुसँग कोरोनाभाइरसको बारेमा यस्ता कुरा मात्र गर्नुहोस!
के दाह्री राख्दा कोरोनाबाट संक्रमित हुने खतरा बढ्छ ?
कोरोनाको उच्च चपेटामा परेका १० मुलुक
१३ चैत्र, काठमाडौं- चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) बाट अहिले विश्व नै आक्रान्त
इटालीमा जस्तै कोरोना नेपालमा फैलिए के हुन्छ ?
कोरोना भाइरसको महामारीको बारेमा जानकार छ । स्थिती भयाभह हुनुपुर्व संक्रमण रोक्नु नै पहिलो प्राथमिकता